ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူများ - China Water & ဖုန်မှုန့်နှင့် သံချေးတက်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းသူများ & စက်ရုံ
5. လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အက်ဆစ်အားနည်းသော အက်ဆစ်နှင့် အားနည်းသော အောက်စ့်များကဲ့သို့သော အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များ ပါဝင်သည်။
SFM(D)G- ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ အလင်းရောင် (ပါဝါ) ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ
7. ဝန်ပိုခြင်း၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော ဆားကစ်ကို ကာကွယ်ပြီး အကိုင်းလိုင်းတစ်ခုစီအတွက် အလင်းရောင် (ပါဝါ) ခလုတ်အဖြစ် အသုံးပြုပါ။
SFK-S-ရေဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ ထိန်းချုပ်ရေးသေတ္တာ (ပလပ်စတစ်အကာအရံ အပြည့်အစုံ)
SFM စီးရီး ရေဖုန်ဒဏ်ခံ ကေဘယ်-ကလစ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ D အမျိုးအစား
1. ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် : -25 ℃ ~ 55 ℃ ;
2. အမြင့်: ≤2000m;
3. ၎င်းသည် ပြင်းထန်သောအက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီ၊ အမိုးနီးယား၊ ဆားနှင့် ကလိုရင်း၊ ရေ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် စိုစွတ်သောလေထု၏ တိုက်စားမှုအတွက် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည်။
4. ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်၊ ဆေးဝါး၊ စစ်တပ်နှင့် သိုလှောင်ရာနေရာများတွင် ပိုက်သွယ်တန်းရန် အသုံးပြုသည်။